ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်: September 2010
အရက်မသောက်ရန် လှည့်လည် ဟောသော သုစရိက ဆရာက တရားပွဲတွင်
"မိတ်ဆွေတို့ စဉ်းစားပါ. . ဒီရွာက ရှိသမျှ ပစ္စည်းတွေ ဘယ်သွားစုနေလဲ. . . စိမ်ရေ ဆိုင်ရှင်၊ အရက်ဆိုင်ရှင်ဆီမှာ စုတယ်မဟုတ်လား . . ."
"အရက်ဆိုင်ရှင်က အ၀တ်အစား အကောင်းဆုံး ၀ယ်ဝတ်နိုင်တယ်. . .အစားအကောင်းဆုံး စားရတယ်. . မော်တော်ကား စီးရတယ်. . ဒါဘယ်က ပိုက်ဆံတွေလဲ ခင်ဗျားတို့ ပိုက်ဆံတွေချည်းပဲ မဟုတ်လား . . ."
နောက်တစ်နှစ်ကြာသော အခါ တရားဟော ဆရာအိမ်သို့ လင်မယား ၂ ယောက် လာကြလေ၏.. .
ဆရာ. . . . . "ဘာကိစ္စလဲ။"
ဧည့်သည်. . . . "ကျွန်မတို့ရွာမှာ ဆရာ လာတရားဟောတဲ့ အတွက် ၀မ်းသာလို့. . ကျေးဇူးဆပ်ရအောင်ပါ. . ."
ဆရာ. . . . . "အခု အရက်မသောက်ကြတော့ဘူးလား။"
ဧည့်သည်. . . . "ဆရာဟောတာနဲက ကျွန်မတို့ဒီနှစ် အရက်လိုင်စင်ဆွဲလိုက်တယ်. . .ဆရာဟောတဲ့အတိုင်း သိပ်မြတ်တာပဲ ဆရာရေ. . ."
ရေးသားသူ may16 at Thursday, September 30, 20106comments:
ရေးသားသူ poemflower at Monday, September 27, 20106comments:
ကဆုန်စိုင်းနေတဲ့ မြင်းရိုင်းတ တစ်ကောင်ပေါ်
တက်စီးမိတဲ့ သူနဲ့ တူသတဲ့
ရောက်ချင်ရာ ရောက်နေတော့ မှာပေါ့။
စဉ်းစား ဆင်ခြင်ပြီးမှ ပြောနော်
ပြောပြီ ဆိုမှ တော့
လေကုန်ခံပြီး ပြောမနေပါနဲ့. . . သမီးရယ်. . .
ရေးသားသူ may16 at Saturday, September 25, 2010 1 comment:
ခုတစ်လော ရာသီဥတုက မိုးရွာလိုက်၊ နေပူလိုက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် မျက်စိတွေ နာကြပါတယ်.. မျက်စိနာရင် အနေခက်ပါတယ် မျက်စိနာခြင်းမှ အမြန်ဆုံး သက်သာပျောက်ကင်းအောင် ကုသဖို့နည်းလမ်းများကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်...
မျက်စိအနီးတစ်ဝိုက်ကို လက်ချောင်းများနှင့် ဖိပွတ်ခြင်း ၊ ခဏခဏကိုင်ခြင်း မပြုရပါဘူး. . . မျက်လုံးက မခံနိုင်အောင် ယားယံလာပါက တစ်ရှူးကို သုံးပြီး သန့်စင်ပေးရပါမယ်. . . မျက်စိနှစ်ဖက်ကို ပိတ်ရက်သားနဲ့ ရေခပ်နွေးနွေးဆွတ်ထားသော သန့်စင်သော အ၀တ်စ နုနုဖြင့် တစ်နေ့ကို ၃-၄ ကြိမ်ခန့် ရေနွေးဝတ် အုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်. . . တစ်ကြိမ်လျှင် ၅ မိနစ်ခန့ ခဏထားပေးပါ. . အဲဒီလို ရေနွေးဝတ် အုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် မျက်စိအတွင်းပိုင်း တွင် ကပ်ကျန်နေသာ မျက်ဝတ်များ အရည်ပျော်စေပါတယ်. . .
ဆရာဝန်ညွန်ကြားထားသော မျက်စဉ်း တစ်မျိုးမျိုးကိုလည်း ခတ်ပေးရပါမယ်. . မျက်စဉ်းကြောင့် ယားယံခြင်း၊ နေရခက်ခြင်း များကို လျော့ပါးသွားစေပါတယ်. . .
မျက်ဝန်းတစ်ဝိုက် ကို ရောဂါပိုး (Infection) ၀င်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် မျက်စိနာနေစဉ်ရက်ပိုင်းတွင် Make Up များ လုံးဝမလိမ်းပါနှင့်. . . မိမိ လိမ်းခြယ်လေ့ရှိသော Make Up ပစ္စည်းများကို သီးသန့်ထားသုံးပါ. . ဘယ်သော အခါမှ အများတကာနှင့် စပ်တူမလိမ်းပါနှင့် . .
မျက်စိနာချိန် မျက်လုံး အပေါ်တွင် ဂွမ်းစ၊ မျက်မှန် စတာများဖြင့်မဖုံးရပါ. . . လွတ်လွတ်လပ်လပ် သာ ထားပေးပါ . . ရောဂါပိုးများကို ဖိတ်ခေါ်သလို ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်. . .မျက်ကပ်မှန်ကို လည်း မတပ်ပဲ ခဏဖြုတ်ထားရပါမယ်. . . လက်ဆေးခြင်းကို မကြာခဏ ပြုလုပ်ပါ ကိုယ်ပိုင် လက်သုတ်ပ၀ါ၊ တဘက် တို့ဖြင့် သုံးပါ. .
မျက်စိနာခြင်းသည် လူတစ်ဦးမှ တစ်ဦးသို့ အန်မတန် ကူးစက်လွယ် ကူးစက်မြန်သည့်အတွက် လက်များ ညစ်ပေမှု မရှိအောင် မျက်နှာသုတ်ပါဝါ၊ လက်ကိုင် ပ၀ါများကို သန့်ရှင်းနိုင်သမျှ သန့်ရှင်းအောင် ထားပေးပါ. . .
ရေးသားသူ poemflower at Thursday, September 23, 20104comments:
လူတစ်ယောက်ဟာ ရိုးသားမှုရှိတယ် မရှိဘူးဆိုတာဟာ သူ့ရဲ့ ပြုမှုလုပ်ကိုင်ပုံတွေက ဖော်ပြပါတယ်. . . ရိုးသားမှုဆိုတာက နှုတ်က ပြောယူလို့မရပဲ အလုပ်ကသာ ကောင်းသော ရိုးသားခြင်းကို ပြသနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်. . ရိုးသားသူတစ်ယောက်ဟာ မိမိနေထိုင်၊ ပြောဆို၊ လုပ်ကိုင်မှုမှာရော ၊ လူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာရော အပြစ်ကင်းစွာနဲ့ နေနိုင်မှ ရိုးသားခြင်းပြည့်စုံမှာ ဖြစ်ပါတယ်. . .
အလုပ်အောင်မြင်မှုဟာ လူမှုဆက်ဆံရေး ပေါ်မှာ များစွာ သက်ရောက်သလို ရိုးသားမှုပေါ်မှာလည်း အဓိက ကျပါတယ်. . . လောကမှာ လူတစ်ယောက်ဟာ. . .
အဲသည် အရည်အချင်းလေးမျိုးနဲ့ ပြည့်စုံပြီး ပညာအမြော်အမြင် ရှိတာနဲ့ အမျှ တိုးတက်ကြီးပွားနိုင်ပါတယ်. . .
ရိုးသားမှုရှိမှ လူမှုဆက်ဆံရေး ၊အလုပ်အကိုင်များ မှာ လွန်စွာ အရေးပါအရာရောက်ပါတယ်. . .
ကျွန်မတို့တွေရဲ့ စိတ်နေသဘောထား ကောင်းမကောင်း ရိုးသားမှုရှိမရှိကို အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်ကလေးတွေ နဲ့ ချိန်ထိုးပြီး စစ်ဆေးကြည့်လို့ရပါတယ်. . . . .
(၁) ဘယ်အမှုကိစ္စမဆို ကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်ပြီး ၊ ကိုယ့်ရဲ့ ထင်မြင်ချက်ကို မှန်ကန်အောင် အားထုတ်ရမယ်။
(၂) မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများတွင် ကောင်းသော အချစ်တစ်ခုခုရှိကြောင်းသိစေရပါမယ်။
(၃) သူများ အောင်မြင်တာကို မိမိအောင်မြင်သကဲ့သို့ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ရှိရပါမယ်။
(၄) မိမိစိတ်ကို ဘယ်အမှုကိစ္စကမှ အနှောင့်အယှက် မပေးနိုင်အောင် ကြံ့ခိုင်ရပါမယ်။
(၅) တွေ့ဆုံတဲ့လူတွေကို ကျန်းမာရေး ၊ကြီးပွားရေး၊ ပျော်ရွှင်ရေးအကြောင်းတွေကို ဖော်ရွေစွာ ပြောရပါမယ်။
(၆)အကောင်းဆုံးအမှုကို စဉ်းစားရမယ်၊ အကောင်းဆုံး အမှုကို လုပ်ကိုင်ရမယ်၊ အကောင်းဆုံး အမှုကို မျှော်လင့်ရမယ်။
(၇) အတိတ်က အမှားများကို မေ့ပစ်ပြီး အနာဂတ်အောင်မြင်မှုကို ရှေးရှုအားထုတ်ရပါမယ်။
(၈) ရွှင်ပြတဲ့ မျက်နှာထားပြီး တွေ့သမျှကို ကြည်ဖြူစွာ ဆက်ဆံရပါမယ်။
(၉) မိမိစီးပွား၊ ကြီးပွား ၊ ပညာတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ကိုင် နေရလို့ သူများ အပြစ်ကို ပြောဖို့ အချိန်မရဘဲ ဖြစ်နေရပါမယ်။
(၁၀) စိတ်ပူပန်ရန် ကြံ့ခိုင်ခြင်း ၊ စိတ်ဆိုးရန် မြင့်မြတ်ခြင်း၊ ကြောက်ရွံ့ရန် အားခွန်ကြီးခြင်း၊ ဒုက္ခနဲ့ ကြုံရန် စိတ်ချမ်းမြေ့ မှုတွေ များခြင်း- စသည်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်. . .
ရေးသားသူ may16 at Tuesday, September 21, 20103comments:
လောက၌ ၊ အကျိုးပေါ်တော့မည့်
(ဓမ္မပဒ- တယောဇန ၀တ္တု)
လုံ့လပညာ၊ နှစ်ဖြာ ပင့်ထောက်
ကာကဏိက ၊ ကြွက်သေမျှနှင့်
ကံအကျိုးကို ခံစားတတ်သူပုဂ္ဂိုလ် သတ္တ၀ါမရှိ၊
ရုပ်နာမ်တရားတို့သာ ကြောင်းကျိုးဆက် ဖြစ်ပေါ်
ဤသို့ သော ညဏ်အမြင်သည်သာ မဖောက်မပြန်
(၀ိသုဒ္ဓိမဂ်၊ ကင်္ခါဝိကရဏ သုဒ္ဓိ)
ကိုယ်နှုတ်နှစ်ဖြာ ၊ ပြုကျင့်ရာ၌
ပုညစစ်စစ် ၊ ကံဟု ဖြစ်၏။
ရေးသားသူ poemflower at Sunday, September 19, 20102comments:
သန်းပေါင်းများစွာသော လူတို့ တွင် ဒူးဆစ်ရောင်ခြင်း ( Osteoarthritis) ကြောင့် ဒူးခေါင်းတောင့်တင်းခြင်း၊ နားခြင်းတို့ ခံစားတွေ့ကြုံရသည် . . . ပျောက်ကင်းမှု အတွက် နည်းလမ်းများတွင် လှုပ်ရှားမှုမှ စတီးရွိုက် ဆေးထိုးခြင်း နှင့် ခွဲစိတ်ကုသမှုအထိ ကုသမှု အမျိုးမျိုးရှိပါသည်...
အစားအသောက်ကို ဂရုစိုက်၍ စားခြင်းဖြင့် ဒူးနာ သက်သာမှု ရရှိကြောင်း လေ့လာချက်များအရ သိရှိရပါသည်..
ငါးကွမ်းရှပ် (သို့) Salmon ငါး ကို အပတ်စဉ်စားခြင်း (သို့) နေ့စဉ် အိုမီဂါ (၃) ဂရမ် စားသုံးခြင်းကလည်း ဒူးနားခြင်းကို သက်သာစေသည်.
ရေးသားသူ may16 at Friday, September 17, 2010 11 comments:
ခုန်ပျံကာ ကျွမ်းအလှ ထိုးပါလို့
(သခင်ရယ်. . )
ရေးသားသူ poemflower at Wednesday, September 15, 20107comments:
ရေးသားသူ may16 at Monday, September 13, 20109comments:
အလုပ်တွေ အဆက်မပြတ် လုပ်ရလို့
နွမ်းလာတဲ့ စိတ်ကို အပန်းမပြေတတ်ရင်
အဲဒီလိုပင်ပန်းလို့ စိတ်နွမ်းလာတဲ့ အခါ
တစ်နေရာမှာ ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်လေး ထိုင်ပြီး အသက်မှန်မှန်ရှု၊ ဘာမှ မတွေးနဲ့။
ပက်လက်လှန် အိပ် ၊ ဗိုက်ပေါ်လက်တင်ပြီး
အဲ့ဒီလို စိတ်ကို အပန်းဖြေတတ်မယ်ဆိုရင်
ကိုယ်လှုပ်လို့ စိတ်က လိုက်လှုပ်ရင် စိတ်ပင်ပန်းမယ်
ကိုယ်လှုပ်ပေမယ့် စိတ်က လိုက်မလှုပ် ရင်
စိတ်ပင်ပန်း နွမ်းနယ်တာမျိုး မဖြစ်ဘူး။
ဒါကြောင့် စိတ်ကို ငြိမ်ငြိမ်လေး ထားတတ်အောင် ကျင့်နော်။
ရေးသားသူ poemflower at Saturday, September 11, 20104comments:
ဘုရားအလောင်း တောထွက်ခါစ၌ ဗိမ္မိသာရမင်း က ထီးနန်းလှူပုံ
ဘုရားအလောင်းသည် ရဟန်းပြုပြီးနောက် ၇ ရက်လောက်ကြာသောအခါ ရာဇဂြိုလ်မြို့သို့ကြွလာ၍ ဆွမ်းခံဝင်တော်မူ၏ ထိုခေတ်၌ ရသေ့ ရဟန်းဆိုသူတို့ဝယ် သပ္ပါယ်တင့်တယ်သူကို တွေ့ရခဲ၏. . . . မတင့်မတယ် နှင့် အရွယ်ကြီးများကိုသာ အများအပြားတွေ့နေရသော မြို့သူမြို့သားတို့သည် အရွယ်အားဖြင့် ၂၉ နှစ်မျှသာ ရှိသေး၍ စကြာမင်း အမှတ်လက္ခဏာ စုံလင်စွာပါသော ဘုရားအလောင်းကို တအံ့တသြ ကြည့်ကြလေသည်. . .
ဘုရားအလောင်းသည် ဆွမ်းခံပြီးပဏ္ဍ၀တောင်သို့ ကြွတော်မူကာ ဆွမ်းဘုဉ်းပေးလေရာ ဗိမ္မိသာရမင်းလည်း ရောက်လာ၍ ရုပ်လက္ခဏာကို မြင်ရုံဖြင့် ဇာတ်မြင့်သော မင်းသားတစ်ပါးဖြစ်တန်ရာ၏ ဟု စဉ်းစားပြီးလျှင် ထီးနန်း စည်းစိမ်ကို လွှဲအပ်လေသည်. . ဘုရားအလောင်းသည် ထီးနန်းစည်းစိမ် မလိုလားဘဲ ဘုရားဖြစ်လိုကြောင်းကို မိန့်တော်မူလျှင် ဘုရားဖြစ်သော အခါ ပထမကြွလာဘို့ရန် တောင်းပန်လိုက်လေသည်။
KING BIMBISARA OFFERING ALL HIS KINGLY GLORY
Now the future Buddha, having thus retired thus from the world and become an ascetic fro about7days, entered the city of Rajagaha and begged for food from house to house. By the beauty of the Future Buddha the whole city was thrown intoacommotion as he wasadistinct ontrast to the usual type of ascetics of those days, who were old and shabby in appearance. The Future Buddha being then only 29 years of age and bearing all the signs ofaUniversal Monarch naturally became an object of admiration and wonder.
Now the Great Being having collected some food for his sustenance went to the shade of Pandava rock and ate his meal. Thereupon, Bimbisara, the King approached the Future Buddha, and being pleased with his princely deportment and appearance offered him all his kingly glory. "Great King" , replied the Future Buddha, "I do not seek for the gratification of my senses or my passions, but have retired from the world for the sake of supreme and absolute enlightenment ofaBuddha."
"Verily, " said the King when his repeated offers had all been refused, "you are sure to becomeaBuddha: but when that happens your first journey will be to my Kindom".
ရေးသားသူ may16 at Friday, September 10, 2010 1 comment:
ရေငတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ပင်ပန်းနွမ်းနွယ်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အချိုရည် ပုလင်းတွေ၊ သံဘူးတွေ သောက်ပါက သင်၏ သွေးဖိအားကို မြင့်တက်စေနိုင်ပါသည်. . . တစ်နေ့လျှင် သစ်သီးမှရသော သကြားဓာတ် (Fructose) ၇၄ ဂရမ် စားသုံးပါက (အချိုရည် သံဘူး ၂ ဘူးခွဲနှင့် ညီမျှသည် ) သွေးဖိအား ၃၆ ရာခိုင်နှုန်း တက်လာစေနိုင်ကြောင်း သိရသည်. . .
အ၀လွန်နေခြင်း၊ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါဖြစ်ခြင်း ၊ သွားပိုးစားခြင်း ပြဿနားများ လည်း ဖြစ်စေနိုင်သည်. . အချိုဓာတ်လျော့ထားသည်ဟု ဆိုသော ဖျော်ရည်ဘူး (Diet Soft Drink) များသည်လည်း စိတ်မချရပါ. .. ဟားဗတ်ဆေးကျောင်းတွင် လေ့လာမှုအရ သကြားအတုဖြင့် ဖျော်ထားသော အချိုရည်ဘူး ၂ ဘူးနှင့် အထက်သောက်သည့် အမျိုးသမီးများတွင် ကျောက်ကပ် လုပ်ငန်းစွမ်းရည် ကျဆင်းနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်း ၂ ဆ ပိုများ ကြောင်း ကြာလျှင် ကျောက်ကပ် ပျက်စီးစေနိုင်ကြောင်း သိရပါသည်. .
မည်သည့် အချိုရည်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကြောက်စရာကောင်းသည်က အဓိကဖြစ်သည်. . ထို့ကြောင့် အချိုရည်ဘူးများနှင့် ပက်သက်လာလျှင် အထူးဧည့်ခံပွဲမျိုးတွင်သာ တစ်ခါတစ်ရံ သောက်ခြင်း သို့မဟုတ် တစ်ဘူးလုံးကုန်အောင် မသောက်ဘဲ အနည်းငယ်မျှသာ ၊ သောက်တယ် ဆိုရုံမျှသာ သောက်သင့်သည့် အကျင့်ကို ပြုလုပ်သင့်ပါသည်. .
ရေးသားသူ may16 at Wednesday, September 08, 2010 8 comments:
လူကြီးသူမများကို ကန်တော့ကြသောအခါ လူငယ်များအား "မျက်နှာမြင်ချင်ခင်ပါစေ" ဟု ဆုတောင်းပေးလေ့ ရှိကြသည်. . . မည့်သည့် မျက်နှာမျိုးသည် အလှပဆုံး ၊ ကျက်သရေအရှိဆုံး၊ တန်ဖိုးအရှိဆုံးဖြစ်သည်ကို ထိုစကားက သက်သေခံနေပါသည်။
အခြားတစ်ဖက်မှလည်း မျက်နှာမြင် ချစ်ခင်ခြင်းခံရသည့် ဘ၀မျိုးသည် အကောင်းဆုံး ၊ အလိုလားအပ်ဆုံးဖြစ် ကြောင်း ညွှန်ပြနေသည်။ သို့သော် ထိုစကားသည် တိုက်ရိုက်ပြောသော စကားမဟုတ်။ သွယ်ဝိုက်၍ ပြောလိုက်သော စကားသာ ဖြစ်ချေသည်။ သူတို့ ရည်ညွှန်းပြောဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပါယ်မှာ ဤသို့ဖြစ်ပါသည်။
၁။မာန်မာန ထောင်လွှားတက်ကြွခြင်းမရှိပါစေနှင့်၊ မိမိကိုယ်ကိုယ် နှိမ့်ချပါ။
၂။ ကြီးသူကို ရိုသေ၊ တန်းတူကို လေးစား၊ ငယ်သူကို သနားပါ။
၃။ လောဘ၊ဒေါသ၊ မာနတရားများကို ချိုးနှိပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
၄။ လူတကာနှင့် အပေါ်စီးကနေပြီး ဆက်ဆံခြင်းမပြုပါနှင့်။ သင့်တင့်မျှတအောင် ဆက်ဆံပေါင်းသင်းပါ။
၅။ မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ ၊ မုဒိတာတရားများ ပွားများနေထိုင်ပါ။
ဤတရား (၅)ပါးသည်သာလျှင် အလှပဆုံး ၊ကျက်သရေအရှိဆုံးသော မျက်နှာများ ဖြစ်လာအောင် ဖန်တီးပေးနိုင်ပါသည်။ ထိုမျက်နှာကို ပိုင်ဆိုင်သူသာလျှင် လူကြီးသူများပေးသော မျက်နှမြင်ချစ်ခင်ပါစေ ဆိုသော ဆုကို ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် လူတကာအလယ်တွင် တင့်တင့်တယ်တယ်၊ မျက်နှာပန်းလှလှ နေထိုင် အသက်ရှင်လိုသူတိုင်းသည် မျက်နှာမြင်ချစ်ခင်စေနိုင်သည့် နည်းလမ်းကောင်းများကို ကျင့်သုံးလိုက်နာမည်ဆိုလျှင်. . .
ရေးသားသူ poemflower at Tuesday, September 07, 20105comments:
ဆရာတော် အရှင်ဇဝန၊ မေတ္တာရှင်(ရွှေပြည်သာ)၊ ဝေနေယျသုခ ဓမ္မရိပ်သာ၊ (8)မိုင်၊ ကော့သောင်းမြို့တွင်
(30-08-2010) ရက်နေ့မှ (01-09-2010) ထိ ဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားတော်များအား
အလုပ်ဖြင့်ကိလေသာကို ပယ်သတ်ခြင်း (၁)
အလုပ်ဖြင့်ကိလေသာကို ပယ်သတ်ခြင်း (၂)
အလုပ်ဖြင့်ကိလေသာကို ပယ်သတ်ခြင်း (၃)
လက်ခံရရှိသူ ဓမ္မမိတ်ဆွေများမှတဆင့် မိမိတို့၏ မိတ်ဆွေများအား လက်ဆင့်ကမ်း ဓမ္မဒါနပြုပေးကြပါရန်
ရေးသားသူ poemflower at Saturday, September 04, 20105comments:
အင်အားကြီးမားသော အမိုက်ရင် အပေါင်းကို တစ်ယောက်အားဖြင့် မအောင်နိုင်သော်လည်း ပေါင်းစုခိုင်ကျည် ညီညွတ်သည်ရှိသော် အောင်နိုင်ရာ၏
မြက်တစ်ပင်တည်း အချည်းနှီးဖြစ်သော်လည်း စုပေါင်း၍ ကျစ်အပ်သည်ရှိသော် ထိုမြက်လွန်ကြိုးသည် ခွန်အားကြီးသော ဆင်ပြောင်ကြီးကိုပင် ချည်နိုင်စွမ်း သကဲ့သို့တည်း။
Strong, bad elements cannot be overcome single-handed but by united action.
A blade of garss is unsubstantial, but many blades made intoarope can bring the strength to tie an elephant.
လေကွယ်ထောင့်ရာ အရပ်၌ မီးတောက်သည် ကြီးထွားမရှိ ငြိမ်းလေဘိသကဲ့သို့ သစ္စစောင့်မြဲ သူရဲဗိုလ်ပါတို့၏ အားပေး ထောက်ကူမရခဲ့မူ ပြည့်ရှင်မင်း၏ တန်ခိုးသြဇာ အရှိန်အ၀ါသည် အဘယ်မှာလျှင် ကြီးထွားအောင်မြင် ရန်ကင်းစင်အောင် ပြုနိုင်ပါမည်နည်း။
Just asaflame cannot thrive but die inaplace deprived of wind,aruler without the backing of faithful retinue cannot cause success and prosperity.
အရှင်သခင်ကိုတု၍ မည်သည့်အမှုကိုမျှ ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင် မပြုအပ်
၀တ်စားဆင်ယင် အလှပြင်ခြင်း၌ လည်းကောင်း ၊ စည်းအိမ်ချမ်းသာ ခံစားရာ၌ လည်းကောင်း အတူမပြုရာ။
No Competition in pride withamaster should be attempted.
No similarity or equality of attire and wealth should be attempted.
ရေးသားသူ may16 at Thursday, September 02, 2010 1 comment: